Methenamine (မီသာနမင်း) - Hello Sayarwon
HelloSayarwon » ဆေးဝါးများ » ဆေးဝါးနှင့်ဆေးဖက်ဝင် » ဆေးဝါးများအားလုံး » Methenamine (မီသာနမင်း)
Methenamine (မီသာနမင်း) ကဘာလဲ။
Generic Name: Methenamine (မီသာနမင်း) Brand Name(s): Generics only. No brands available.
Methenamine (မီသာနမင်း) ကို ဘာအတွက်အသုံးပြုကြသလဲ
Methenamine ကို တစ်ချို့သော ဘက်တီးရီးယားများကြောင့် ပြန်ပြန်ဖြစ်တတ်သော ဆီးလမ်းကြောင်းပိုးဝင်ခြင်းအား ကုသရန်၊ ကာကွယ်ရန်အတွက် အများဆုံးအသုံးပြုကြသည်။ လက်ရှိဖြစ်နေသော ပိုးဝင်ခြင်းအတွက် အသုံးပြုသည်မဟုတ်ပါ။ အရင်ဦးဆုံး လက်ရှိဖြစ်နေသော ပိုးဝင်ခြင်းကို တခြားပဋိဇီဝဆေးများဖြင့် ကုသရမည်ဖြစ်သည်။
Methenamine သည် ဆီးအတွင်းမှ ဘက်တီးရီးယားများကြီးထွားခြင်းကို တားပေးသော ပဋိဇီဝဆေးတစ်မျိုးဖြစ်သည်။ ဤဆေးတွင် ဆီးကို အက်စစ်ဓါတ်ပိုများစေသည့်ပါဝင်ပစ္စည်းလည်း ပါရှိပါသည်။ ဆီးတွင်အက်စစ်ဓါတ်ပိုလာသည့်အခါ Methenamine ကို Formaldehyde အဖြစ် ပြောင်းလဲပေးပြီး ဘက်တီးရီးယားများကို သတ်စေပါသည်။
ဤပဋိဇီဝဆေးမှာ ဆီးလမ်းကြောင်းတွင်ဝင်သော ဘက်တီးရီးယားများအတွက်သာ အာနိသင်ပြ၏။ တခြားသောဘက်တီးရီးယားရောဂါများ (ဥပမာ သွေးအတွင်း) သို့မဟုတ် ဗိုင်းရပ်စ်ရောဂါများ (ဥပမာ အအေးမိတုပ်ကွေး) တို့အတွက် အာနိသင်မရှိပါ။ မည်သည့်ပဋိဇီဝဆေးမဆို မလိုအပ်ပဲသုံးမိပါက အာနိသင်လျော့ကျခြင်းကို ဖြစ်စေနိုင်ပါသည်။
Methenamine (မီသာနမင်း) ဘယ်လိုသောက်သုံးသင့်သလဲ
ဤဆေးကိုဆရာဝန်ညွှန်ကြားသည့်အတိုင်း သောက်သုံးရပါမည်။ ဆေးပမာဏမှာ သင့်အတွက်ညွှန်သော Methenamine ဆေးကုန်၊ သင့်ကျန်းမာရေးအခြေအနေနှင့် ရောဂါအပေါ် တုံ့ပြန်မှုတို့တွင် မူတည်ပါသည်။ ကလေးများအတွက် ဆေးပမာဏမှာ အသက်အရွယ်နှင့် ကိုယ်အလေးချိန်ပေါ် မူတည်ပါသည်။
Methenamine သည် သင့်ဆီး၌ အက်စစ်ဓါတ်များမှ အာနိသင်ကောင်းကောင်းပြ၏။ ဆရာဝန်မှ သင့်ဆီး၏ အက်စစ်ဓါတ်ကို စစ်ဆေးပါလိမ့်မည်။ လိုအပ်ပါက ဆရာဝန်သည် ဆီးတွင်းအက်စစ်ဓါတ်များစေမည့် နည်းများ (ဗီတာမင်စီသောက်ခြင်း၊ ကရိန်ဘယ်ရီသီး ဖျော်ရည်သောက်ခြင်း၊ အက်စစ်ဓါတ်နည်းပြီး အယ်ကာလီဓါတ်များစေသော နို့နှင့် နို့ထွက်ပစ္စည်းများ၊ သစ်သီးများကိုရှောင်ခြင်း၊ အယ်ကာလီဖြစ်စေသည့်ဆေးများကို ချိန်ညှိခြင်း) ကို ညွှန်ပါလိမ့်မည်။ ဆရာဝန်ညွှန်ကြားသည့်အတိုင်း လိုက်နာပါ။ အကောင်းဆုံးအာနိသင်ရရန် ပဋိဇီဝဆေးများကို အချိန်ညီညီမျှမျှခြား၍သောက်ပါ။ ဆေးသောက်ချိန်ကိုမှတ်မိနေစေရန်အတွက် နေ့စဉ် တူညီသောအချိန်၌သာသောက်ပါ။
နေကောင်းလာပြီဟု ခံစားရသည့်တိုင် ဆေးကို ရက်အပြည့်ဆက်သောက်ရမည်။ အကြိမ်ရေလွတ်ခြင်း၊ စောပြီးရပ်လိုက်ခြင်းတို့က ဘက်တီးရီးယားများကို ဆက်လက်ကြီးထွားစေပြီး ရောဂါပြန်ဖြစ်စေကာ နောက်တွင် ကုသရန်ခက်သွားပါလိမ့်မည်။ (ဆေးယဉ်သွားမည်)။ ဆေးကို ညွှန်ကြားထားသည့်ထက်လည်း ပိုမသုံးရပါ။ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများဖြစ်နိုင်ချေ ပိုများသွားပါလိမ့်မည်။
ဆီးလမ်းကြောင်းပိုးဝင်သည့်လက္ခဏာများ (ဆီးသွားလျှင် နာခြင်း၊ ပူခြင်း၊ ခဏခဏသွားခြင်း) ပြန်ဖြစ်လာပါက ဆရာဝန်ကိုပြောပါ။
Methenamine (မီသာနမင်း) ဘယ်လိုသိမ်းဆည်းရမလဲ
Methenamine ကို တိုက်ရိုက်နေရောင်ခြည်မထိုးအောင်နှင့် စိုစွတ်မှုမရှိအောင်ထားခြင်းက အကောင်းဆုံးသိုလှောင်သိမ်းဆည်းနည်းပင် ဖြစ်သည်။ ဆေးအာနိသင်ပျက်ပြယ်ခြင်းနှင့် ဆေးအနေအထား ပျက်ယွင်းမှုများ မဖြစ်စေရန် Methenamine ကို ရေချိုးခန်းတွင်သိမ်းဆည်းခြင်းနှင့် ရေခဲအောင် သိမ်းဆည်းခြင်းမျိုးမပြုလုပ်ပါနှင့်။ Methenamine ဆေးအမျိုးအစားနှင့် ဆေးထုတ်လုပ်သည့်ကုမ္ပဏီ ကွဲပြားမှုပေါ်မူတည်ပြီး သိမ်းဆည်းသောပုံစံ ကွဲပြားခြားနားမှုများ ရှိနိုင်ပါသည်။ ထို့အတွက် ဆေးဘူးအခွံ၌ပါသော သိုလှောင်သိမ်းဆည်းမှု ညွှန်ကြားချက်ကို ကြည့်ရှုစစ်ဆေးခြင်း သို့မဟုတ် ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်သူအား မေးမြန်းခြင်းကို အမြဲလုပ်ပါ။ လုံခြုံစိတ်ချရစေရန်အတွက် ဆေးဝါးအကုန်လုံးကို ကလေးများ၊ အိမ်မွေးတိရိစ္ဆာန်များနှင့်ဝေးရာတွင်ထားပါ။
Methenamine အားအိမ်သာထဲပစ်ချခြင်း၊ ရေထွက်ပေါက်များမှ ဆေးချခြင်းမျိုးအား မလုပ်သင့်ပါ။ ဆေးဝါးများကို မလိုအပ်တော့သည့်အခါ ဒါမှမဟုတ် သက်တမ်းကုန်ဆုံးသွားသည့် အခါများတွင် စနစ်တကျစွန့်ပစ်ရန် အရေးကြီး၏။ ဆေးဝါးများကို စနစ်တကျ မည်ကဲ့သို့စွန့်ပစ်ရမည်ဆိုခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ သင့်၏ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်ပညာရှင်နှင့် တိုင်ပင်နိုင်ပါသည်။
Methenamine (မီသာနမင်း) အသုံးမပြုခင် ဘာတွေသိသင့်သလဲ
Methenamineကိုမသုံးခင် ဤဆေးနှင့်ရော တခြား formaldehyde များနှင့်ရောဓါတ်မတည့်ခြင်း သို့မဟုတ် တခြားသောဓါတ်မတည့်မှုများရှိပါက ဆရာဝန်ကိုကြိုပြောပါ။ ဤဆေးတွင် သင့်နှင့်ဓါတ်မတည့်နိုင်သည့် inactive ဓါတ်ပစ္စည်းများ ပါနေနိုင်ပါသည်။ အသေးစိတ်သိလိုပါက ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်နှင့် ဆွေးနွေးပါ။
ဤဆေးကိုမသုံးခင် သင့်ကျန်းမာရေးရာဇဝင်များကို ဆရာဝန်သို့မဟုတ် ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်အား ပြောပြပေးပါ။ အထူးသဖြင့်ကျောက်ကပ်ပြဿနာများ၊ အသည်းပြဿနာများ၊ ရေဓါတ်ခမ်းခြင်း။
ကိုယ်ဝန်ဆောင်စဉ်၌ ဆေးကို အမှန်တကယ်လိုအပ်မှသာ အသုံးပြုပါ။ ကောင်းကျိုး ဆိုးကျိုးများအတွက် ဆရာဝန်နှင့် တိုင်ပင်ပါ။
ဆေးသည် နို့ရည်ထဲသို့ ဖြတ်သွားနိုင်ပြီး နို့စို့ကလေးတွင် သက်ရောက်မှုရှိစေနိုင်ပါသည်။ နို့တိုက်ကျွေးမှုမစတင်ခင် ဆရာဝန်နှင့် တိုင်ပင်ဆွေးနွေးပါ။
ကိုယ်ဝန်ဆောင်နေချိန် ဒါမှမဟုတ် ကလေးနို့တိုက်နေချိန်မှာ Methenamine (မီသာနမင်း) ကိုသုံးစွဲဖို့ စိတ်ချရပါသလား
Methenamine (မီသာနမင်း) ကိုအသုံးပြုခြင်းဖြင့် ဘယ်လိုဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေဖြစ်နိုင်သလဲ
ပျို့ခြင်း၊ အန်ခြင်း၊ ဝမ်းလျှောခြင်း၊ ဗိုက်အောင့်ခြင်းနှင့် အစားအသောက်ပျက်ခြင်းများ ဖြစ်လာနိုင်ပါသည်။ အဆိုပါဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများ ပျောက်မသွားလျှင် သို့မဟုတ် ပိုဆိုးလာလျှင် ဆရာဝန်၊ ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်ကို ချက်ချင်းပြောပါ။
ဆေးကြောင့် ဆီးသွားလျှင်နာခြင်း၊ ခက်ခြင်းများမှာ အဖြစ်နည်းသည်ဆိုသော်လည်း ဖြစ်လေ့ရှိပါသည်။ ထိုဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများဖြစ်လာပါက ဆရာဝန်ကို ပြောပြပါ။ ပမာဏလျော့ခြင်း သို့မဟုတ် ဆီးတွင်းအက်စစ်ဓါတ်လျော့စေမည့် ကုသမှုပြောင်းပေးခြင်းများ ပြုလုပ်ရနိုင်ပါသည်။
သတ်မှတ်ထားသော Methenamine ပမာဏထက် ပိုများပြီးသောက်ပါက ဆီးအိမ်နာခြင်း၊ ဆီးသွားလျှင် နာခြင်း၊ ခဏခဏသွားချင်ခြင်း၊ ဆီးတွင်သွေးပါခြင်းများ ဖြစ်လာနိုင်ပါသည်။ အဆိုပါလက္ခဏာများဖြစ်လာပါက ဆရာဝန်ကို ချက်ချင်းပြောပါ။
ဖြစ်လေ့ဖြစ်ထမရှိသော်လည်း ပြင်းထန်သည့် ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများဖြစ်သော ပါးစပ်နာခြင်း၊ ပုံမှန်မဟုတ်ပဲ ခေါင်းကိုက်ခြင်း၊ နားထဲ၌ တစီစီမြည်နေခြင်း၊ ကြွက်တက်ခြင်း၊ ခြေလက်များ၌ ဖောရောင်ခြင်းတို့ဖြစ်လာပါက ဆရာဝန်ဆီ ချက်ချင်းဆက်သွားရပါမည်။
ဘယ်ဆေးတွေက Methenamine (မီသာနမင်း) နဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်သလဲ
ဤဆေးနှင့်ဓါတ်ပြုနိုင်သောဆေးကုန်များမှာ sulfonamide ဆေးများ (sulfa antibiotics ဥပမာ- sulfamethizole), ဆီးထဲ၌အက်စစ်နည်းစေသော ဆေးများ (urinary alkalinizers -antacids, sodium bicarbonate, potassium သို့မဟုတ် sodium citrate, carbonic anhydrase inhibitors – acetazolamide) တို့ဖြစ်ပါသည်။
ဤဆေးသည် တစ်ချို့သော ဓါတ်ခွဲစစ်ဆေးခြင်းများကို နှောက်ယှက်နိုင်သောကြောင့် ရလဒ်အမှားများ ဖြစ်လာနိုင်သည်။ ထို့ကြောင့် ဓါတ်ခွဲဝန်ထမ်းများ၊ ဆရာဝန်များသိအောင် ဤဆေးသုံးနေရကြောင်း သေချာပြောပြပါ။
Methenamine သည် သင်အခုသောက်သုံးနေသည့် တခြားသောဆေးဝါးများနှင့် ဓါတ်ပြုမှုများဖြစ်နိုင်ပြီး ဆေးဝါးအာနိသင်ပြောင်းခြင်းနှင့် ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးဖြစ်လာနိုင်သော ပြောင်းလဲမှုများဖြစ်နိုင်ပါသည်။ မလိုလားအပ်သောဆေးဝါးဓါတ်ပြုမှုများ မဖြစ်လာစေရန် သင်လက်ရှိသောက်သုံးနေသော ဆေးဝါးများအားလုံးကိုစာရင်းပြုစုထားပြီး (စာရင်းလုပ်သည့်အခါ ဆရာဝန်ညွှန်ကြားထားသည်များ၊ မညွှန်ကြားဘဲသောက်သုံးနေသည်များ၊ သဘာဝဆေးဘက်ဝင်ပစ္စည်းများ အားလုံးပါရပါမည်။) ဆရာဝန် သို့မဟုတ်ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်သူအား အမြဲပြောပြပါ။ ဆေးဝါးများကို ဆရာဝန်ခွင့်ပြုချက်မပါပဲ သောက်သုံးခြင်း၊ ရပ်ဆိုင်းခြင်း၊ ပမာဏပြောင်းလဲခြင်းများ မပြုလုပ်ပါနှင့်။
အစားအသောက်တွေနဲ့ အရက်က Methenamine (မီသာနမင်း) နဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်သလား
Methenamine က အစားအသောက် သို့မဟုတ် အရက်သေစာနှင့် ဓါတ်ပြုမှုများဖြစ်နိုင်ပြီး ဆေးဝါးများ၏အကျိုးသက်ရောက်မှုပုံစံနှင့် ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးဖြစ်လာနိုင်သောပြောင်းလဲမှုများ ဖြစ်နိုင်ပါသည်။ မလိုလားအပ်သည့် ဓါတ်ပြုမှုများမဖြစ်လာစေရန် အစားအသောက်၊ အရက်သေစာများနှင့် ဓါတ်ပြုနိုင်ချေရှိမရှိကို မေးမြန်းတိုင်ပင်ပါ။
ဘယ်ရောဂါအခြေအနေတွေက Methenamine (မီသာနမင်း) နဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်သလဲ
Methenamine သည် သင်၏ နဂိုကျန်းမာရေးအခြေအနေများနှင့် သက်ရောက်ဓါတ်ပြုမှုများရှိနိုင်ပါသည်။ သင်၏ ကျန်းမာရေးအခြေအနေအားပိုဆိုးသွားစေခြင်း သို့မဟုတ် ဆေးသက်ရောက်မှုပုံစံ ပြောင်းလဲသွားခြင်းများ ဖြစ်နိုင်ပါသည်။ ထို့ကြောင့် သင်၏ကျန်းမာရေးအခြေအနေအကုန်လုံးကို သင့်ဆရာဝန် သို့မဟုတ် ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်ပညာရှင်ကို အသိပေးရန်အရေးကြီးပါသည်။
အရွယ်ရောက်ပြီးသူတွေအတွက် Methenamine (မီသာနမင်း) ရဲ့ အသုံးပြုရမယ့်ပမာဏကဘယ်လောက်လဲ
Hippurate: တစ်ရက်လျှင် 1 g နှစ်ကြိမ် (မနက်နှင့်ည)
Mandelate: တစ်ရက်လျှင် 1 g လေးကြိမ် (ထမင်းစားပြီးတိုင်းနှင့် အိပ်ယာဝင်ချိန်)
-Hippurate: မကြာခဏပြန်ဖြစ်လေ့ရှိသော ဆီးလမ်းကြောင်းပိုးဝင်ခြင်းတွင် ရေရှည်ကုသရန် လိုလာသည့်အခါ ကာကွယ်ရန် သို့မဟုတ် ထပ်မဖြစ်အောင်ဖိနှိပ်ထားရန်သုံးသည်။
-Mandelate: ဘက်တီးရီးယားကြောင့်ဖြစ်သော pyelonephritis, ဆီးအိမ်ရောင်ခြင်းနှင့် တခြားနာတာရှည် UTIs များ၊ တစ်ချို့သော အာရုံကြောရောဂါများကြောင့်ကြွင်းကျန်နေတတ်သော ပိုးပါသည့်ဆီးအတွက် အရှင်းပျောက်စေရန်။
ဆီးအိမ်ရောင်ခြင်းအား ကာကွယ်ရန်အတွက် ပုံမှန်ပမာဏ
Pyelonephritis အတွက် ပုံမှန်ပမာဏ
ကျောက်ကပ်မကောင်းခြင်း – လုံးဝမသုံးရပါ။
ပြင်းထန်စွာအသည်းမကောင်းခြင်း – လုံးဝမသုံးရပါ။
-Hippurate: သင့်တော်သော ပဋိဇီဝဆေးများနှင့် ပိုးအရှင်းသတ်ပြီးမှသာ ပေးရမည်။
-အယ်ကာလီဖြစ်စေသောအစာနှင့်ဆေးများကို ကန့်သတ်ရမည်။ ဤဆေး၏ ပိုးသတ်နိုင်သော အာနိသင်မှာ အက်စစ်များသောဆီးတွင် ပိုကြီး၏။ (အာနိသင်အများဆုံးကို pH5.5 တွင် တွေ့ရသည်)
-ဆီး pH နှင့် ဆေးအပေါ်တုံ့ပြန်မှုတို့ကိုအခြေခံ၍ လိုအပ်ပါက ဆီးတွင်အက်စစ်များစေရန် ဖြည့်စွက်ဆေးများပေးနိုင်ပါသည်။
-25C (77F)တွင် သိုလှောင်ပါ; အများဆုံးအနေနှင့် 15C to 30C (59F to 86F) အထိ ထိတွေ့နိုင်ပါသည်။
-Mandelate: အလင်းမပေါက်သော ပုလင်းများတွင် ကြပ်နေအောင်ပိတ်ထားပါ။
ကလေးတွေအတွက် Methenamine (မီသာနမင်း) ရဲ့ အသုံးပြုရမယ့်ပမာဏကဘယ်လောက်လဲ
၆-၁၂ နှစ် – တစ်ရက်လျှင် 0.5 -1 g နှစ်ကြိမ် (မနက်နှင့်ည)
၁၃ နှစ်နှင့်အထက် – တစ်ရက်လျှင် 1 g နှစ်ကြိမ် (မနက်နှင့်ည)
၆-၁၂ နှစ် – တစ်ရက်လျှင် 0.5 g လေးကြိမ် (ထမင်းစားပြီးတိုင်းနှင့် အိပ်ယာဝင်ချိန်)
၁၃ နှစ်နှင့်အထက် – တစ်ရက်လျှင် 1 g လေးကြိမ် (ထမင်းစားပြီးတိုင်းနှင့် အိပ်ယာဝင်ချိန်)
အသက် ၆ နှစ်အောက်ကလေးများအတွက် စိတ်ချရမှုနှင့် အာနိသင်ရှိမှုကို ထုတ်ပြန်ထားခြင်း မရှိသေးပါ။
Methenamine (မီသာနမင်း) ကိုဘယ်လိုရရှိနိုင်သလဲ
Methenamine ကိုအောက်ဖော်ပြပါ ဆေးဝါးပုံစံများနှင့် အချိုးအစားများဖြင့် ရရှိနိုင်ပါသည်။
Methenamine ကိုသုံးစွဲဖို့ လွတ်သွားခဲ့ပါက (မေ့ခဲ့ပါက) သတိရသည့်အချိန်တွင် အမြန်ဆုံးသုံးပါ။ သို့သော်လည်း နောက်တစ်ကြိမ်သုံးရမည့်အချိန်နှင့် နီးကပ်နေပြီဆိုပါက လွတ်သွားသောအကြိမ်ကိုကျော်ပြီး ပုံမှန်အချိန်၌ပင်သုံးလိုက်ပါ။ ဆေးပမာဏအား နှစ်ဆတိုးတာမျိုး မလုပ်ပါနှင့်။
Polycystic Kidney	(ကျောက်ကပ်ရေအိတ်တည်ခြင်း)
Home Ear Examination (အိမ်တွင်း နားစစ်ဆေးနည်း)